नेपालको वास्तविक परीक्षा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २१, २०७५ हिमेश बज्राचार्य
ढाका — भुटानी टिम र यसले खेल्ने फुटबलबारे काठमाडौंमा धेरै कथा सुन्न पाइन्छ । कुनै समय थियो, जतिबेला थिम्पु–११ का भुटानी खेलाडी काठमाडौंमा खुबै लोकप्रिय थिए । त्यतिबेला खरे बस्नेत र उनका केही साथीको नाम नसुन्ने को मात्र होला ?
थिम्पु ११ र पुलिसबीच बर्थ डे कपका फाइनल त अचेल एकादेशको कथा भए । सन् १९८४ मा काठमाडौंमा पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुद हुँदादेखि भुटानसँग नेपालको फुटबल साइनो जोडिएको थियो ।
त्यतिबेला यी दुई टिमबीच खेल हुँदा नेपालको पक्षमा स्कोर थियो, ५–० । गोल गर्ने खेलाडी थिए, किरण राई, गणेश थापा र कृष्ण थापा । अब सन् १९९९ को प्रसङ्ग । त्यतिबेला पनि नेपालले आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गरेको थियो र फुटबलमा नेपालले भुटानमाथि निकालेको स्कोर थियो, ७–० । भुटान लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पुनरागमन गरेको अवस्थामा थियो । संयोगले यो नै नेपाली टिमले हात पारेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो जित हो ।
त्यो खेलपछि भुटानी कप्तान दिनेश क्षेत्री भन्थे, ‘हाम्रो तुलनामा नेपालको फुटबल कता हो कता अगाडि छ ।’ अब धेरै पछाडि सन् २००९ मा कोलकातामा नेपाल र भुटानबीचको मैत्रीपूर्ण खेलको प्रसङ्ग । तत्कालीन प्रशिक्षक थिए, उनै कृष्ण थापा । त्यस खेलमा लामो समय एक गोलले पछाडि रहेर नेपालले २–१ को जित निकालेको थियो । फेरि ग्राहम रोबर्टसको पालामा पोखरामा सम्पन्न फ्रेन्डलीमा नेपाल भुटानलाई हराउन संघर्षरत रह्यो ।
अभ्यासमै गोलकिपर किरण लिम्बु र अर्का खेलाडी।तस्बिर : कञ्चन अधिकारी
कति धेरै फरक पुराना र अहिलेको दिनको जित–हारमा । भलै, नेपालका लागि भुटान नै एक मात्र यस्तो प्रतिद्वन्द्वी हो, जसका विरुद्ध नेपाल प्रत्येकपल्ट विजयी रहेको छ । जितबाहेक बराबरी पनि भएको छैन । तर अचेल भुटानी फुटबलको कथा फेरिएको छ । उसले फुटबलमा गरेको प्रगति देखेर नेपाललाई डाहा लाग्न सक्छ । यसै पृष्ठभूमिमा बिहीबार नेपालले साफ च्याम्पिनयसिपमा भुटानको सामना गर्दै छ र यो हुनेछ, नेपालका लागि ‘अल्टिमेट टेस्ट’ ।
यसको नेपाली रूपान्तर हुनसक्छ, वास्तविक परीक्षा । यो खेल जिते, नेपालका लागि प्रतियोगिताको नकआउट चरण प्रवेश जीवन्त हुनेछ । त्योबाहेक अर्को नतिजामा प्रश्न स्वाभाविक बन्ने छ, नेपालले किन फुटबल खेल्ने ? कसरी खेल्ने ? अहिले जसरी फुटबल चलिरहेको छ, त्यसरी नै चल्ने दिने वा होइन, त्यसमा सुधार गर्ने ? त्यसैले यो नेपालका लागि भुटानविरुद्धको खेलमा सीमित हुने छैन । यो त हुनेछ समग्र नेपाली फुटबलकै वास्तविक परीक्षा ।
‘हार्नुपर्ने कारण छैन’
नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन भने भुटानविरुद्धको खेलमा आफ्नो टिम हार्नुपर्ने कारण देख्दैनन् । शेख जमाल धनमुन्दी फुटबल क्लबको मैदानमा बुधबार नेपाली टिमले दिउँसो प्रचण्ड गर्मी झेल्दै अभ्यास गरेको थियो ।
त्यसअगाडि नेपाली मिडियासँग कुराकानी गर्दै महर्जनले भने, ‘भुटान र बंगलादेश त्यस्ता टिम होइन, जसविरुद्ध हामीले जित नै निकाल्न सक्ने छैनौं । मलाई आफ्नो टिममा पूरा विश्वास छ । हामी आफूअनुकूल नतिजा निकाल्न सक्षम छौं ।’
नेपालले मंगलबार भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पाकिस्तानसँग २–१ को हार बेहोरेको थियो । भुटान त्यही दिनको खेलमा बंगलादेशविरुद्ध २–० ले पराजित रह्यो । यो हारले दुवै टिम एकखाले दबाबमा छन् र प्रतियोगिताबाट बाहिरिने डरबाट गुज्रिरहेका छन् । ‘म पहिलो खेल हार्दैमा निरास हुने प्रशिक्षक होइन,’ महर्जनले भने, ‘म टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्नेमा सकारात्मक छु । नेपाल सेमिफाइनल पुग्नेछ, म यसलाई लिएर आशावादी छु ।’
यसै समूहमा बिहीबार बंगलादेश र पाकिस्तान पनि खेल्ने छन् । यी दुई खेलमा चारै टिमको नजर हुनेछ र सम्भवत: त्यसयता सेमिफाइनल पुग्ने दुई टिमको समीकरण धेरै हदसम्म स्पष्ट हुनेछ । भुटानविरुद्धको सम्भावित रणनीतिलाई लिएर प्रशिक्षक महर्जनको निष्कर्ष थियो, ‘पाकिस्तानविरुद्ध हाम्रा खेलाडीले कसरी खेले, त्यसमा म सन्तुष्ट नै छु् । तर म पाकिस्तानविरुद्ध हाम्रा खेलाडीले गरेको गल्ती भुटानविरुद्ध पनि दोहोर्‍याउन दिने छैन ।’ अन्त्यमा उनको भनाइ थियो, नेपाली टिमलाई सबै प्रशंसकको शुभेच्छा पनि चाहिन्छ ।
भुटानी प्रशिक्षक ट्रेभर मोर्गन पनि नेपालविरुद्धको खेललाई लिएर उत्साही छन् । उनको भनाइ छ, दुवै टिम पहिलो खेलमा पराजित रहेको हुँदा दुवैले स्पष्ट जितलाई खेल्नेछन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धा रहने छ, ‘ओपन गेम’ अर्थात खुला खेल ।
इस्ट बंगालमा दुई अवसरमा प्रशिक्षक रहिसकेका मोर्गनको पनि दाबी छ, पछिल्लो समय भुटानी फुटबलमा सुधार आएको छ, त्यसैले भुटानलाई कमजोर मानेर पहिले जस्तै खेल्नु गम्भीर भुल हुनेछ ।
भुटानका प्रमुख खेलाडी रहनेछन्, मिनरेवा पन्जाबका चेन्चो ग्याल्सेन । पन्जाबले पछिल्लो जे लिग जित्दा जहाँ गोलपोस्टको जिम्मा किरण लिम्बुले सम्हालेका थिए, त्यहीं आक्रमणको जिम्मा ग्याल्सेनको काँधमा थियो ।
भुटानी फुटबलले गरेको प्रगतिको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हुन्, यिनै ग्याल्सेन । उनी भुटानका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी पनि हुन् । नेपालले आफ्नो अनुकूल नतिजा निकाल्ने हो भने यी ग्याल्सेनलाई रोक्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:४५
म्यानचेस्टर युनाइटेड र प्रशिक्षक मोउरिन्होबीच समस्या सुल्झाउन अब कमै विकल्प अगाडि छन् ।
भाद्र २१, २०७५ फिल म्याकनल्टी
म्यानचेस्टर — प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्हो र म्यानचेस्टर युनाइटेडबीच पछिल्लो केही महिना सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको छैन । मोउरिन्होले क्लबको ट्रान्सफर पद्दतिलाई आफ्नो उपाधि जित्ने शैलीसँग मेल नखाने बताउँदै आएका छन् ।
जाेसे माेउरिन्हाे । तस्बिर : राेयटर्स
उनले यसबारे पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठाए पनि आक्रोश व्यक्त गरिरहँदा युनाइटेड भने प्रशिक्षकसँग कुनै समस्या नरहेको संकेत दिइरहेको छ ।
दुई साताअघि घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा टोटेनहमविरुद्ध पराजित भएपछि मोउरिन्हो झनै समस्यामा परे । त्यसपछि बर्नलीविरुद्धको जितले केही राहत मिले पनि मोउरिन्हो र क्लबबीच असमझदारीको कुण्ठा अझै छन् । क्लबले यसका बाबजुत पनि केही समस्या नरहेको संकेत दिन्छ भने त्यसले क्लब आफैंलाई उल्याउनुबाहेक अन्यलाई फरक पर्दैन । क्लब र प्रशिक्षकबीच समस्या सुल्झाउन अब कमै विकल्प अगाडि छन् ।
मोउरिन्होले उक्त टोटेनहमविरुद्ध हारपछि पत्रकार सम्मेलनमा आफूले तीन प्रिमियर लिग उपाधि जितेका कारण धेरै सम्मानको हकदार रहेको बताएका थिए, जुन सत्य हो । तर चेल्सीको प्रशिक्षक छँदा मोउरिन्होले गरेको व्यवहार युनाइटेड समर्थकले प्रस्ट देखेका छन् । युनाइटेड समर्थक वर्तमान अवस्थाबारे धेरै चिन्तित छन् र स्पर्सजस्तो प्रतिद्वन्द्वीसँग घरेलु मैदानमा फराकिलो पराजयले स्थिति जटिल बनाएको छ ।
लुकास मोउराले खेलको अन्त्यतिर तेस्रो गोल गर्दै स्कोर ३–० बनाएपछि मैदानमा रहेका अधिकांश समर्थकले खेल सकिनुअगावै खेल छाडेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसले पनि क्लब र मोउरिन्होको खटपट समर्थकले नरुचाएको बुझ्न सकिन्छ ।
मोउरिन्होले खेलको नतिजा उल्टो हुनुमा मुख्य कारक रोमेलु लुकाकुले पहिलो हाफमा खाली पोस्टमा गोल गर्न नसक्नुलाई पनि दिन सक्छन् । तर स्पर्सले खेलमा लय समाएपछि युनाइटेड खेलमा फर्कन नसक्नुले टोलीलाई बढी चिन्तित बनाएको छ । मोउरिन्होले आफ्नो पुरानो सफलताबारे बोल्नु धेरैले अपेक्षा गरेकै हर्कत थियो । तर उनीजस्तो प्रभावशाली र सफल प्रशिक्षकले यसरी प्रस्तुत हुनु राम्रो संकेत भने पक्कै होइन ।
मिडिया र समर्थकले आ–आफ्नो तर्क राख्नु स्वभाविक छ । तर मोउरिन्हो र क्लबमाथि बढिरहेको दबाब भने प्रस्ट देख्न सकिन्छ । ब्राइटन र स्पर्सविरुद्धको हारसँगै युनाइटेडले सन् १९९२–९३ यता लिगमा सबैभन्दा खराब सुरुआत गरेको थियो । त्योभन्दा बढी हाल युनाइटेडले खेल्ने शैली समर्थक लोभ्याउने किसिमको छैन ।
जसरी पेप ग्वार्डिओलाको म्यानचेस्टर सिटी, योर्गन क्लोपको लिभरपुल, मोउरिसियो पोचेटिनोको स्पर्स र यसै सिजन भित्रिएका चेल्सीका मोउरिजियो सार्रीले प्रभाव छाडेका छन्, मोउरिन्हो त्यस सूचीमा अटाउन सकेका छैनन् ।
मोउरिन्होका अनुसार क्लबका खेलाडीले प्रशिक्षकको मागअनुसार प्रदर्शन गरिरहेका छैनन् । स्पर्सविरुद्ध पहिलो हाफमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि लुकाकुले सामान्य गोल नगर्दा टोलीले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । टोलीको रक्षापंक्ति कमजोर हुनु नै मोउरिन्होका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ ।
मोउरिन्होले पुराना सबै क्लबमा सफलता हात पार्दा रक्षात्मक रूपमा अब्बल रणनीति अपनाएका थिए । त्यो समय र त्यो टोली अब मोउरिन्होसँग छैनन् । हालको युनाइटेड डिफेन्स सम्भवत: मोउरिन्होको करिअरकै सबैभन्दा कमजोर डिफेन्सका रूपमा अगाडि आएको छ ।
स्पर्सले दोस्रो हाफमा लय समातेपछि युनाइटेडको डिफेन्स त्यसको सामना गर्न असमर्थझैं देखियो । मोउरिन्होले डिफेन्डरद्वय फिल जोन्स र क्रिस स्मलिङसँग मिडफिल्डर आन्देर हरेरालाई रक्षात्मक ढालका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति पहिलो गोल खाएपछि सफल हुन सकेन ।
मोउरिन्होले सिजनको सुरुआतमा सेन्टर डिफेन्सको माग गर्नु जायज थियो । तर उनकै आगमनपछि क्लबमा झन्डै ६ करोड पाउन्डमा भित्रिएका भिक्टर लिन्डेलफ र एरिक बेलीले पनि ब्राइटनविरुद्ध अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसकेपछि टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् ।
स्पर्सविरुद्ध वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका लिन्डेलफ डरमा खेलिरहेका जस्तो देखिन्थे । उनको गल्तीमा स्पर्सले अग्रता बढाउने अवसर पनि पाएको थियो ।
युनाइटेडको खराब प्रदर्शनलाई स्पर्स डिफेन्डर टोबी एल्डरवेरल्डको प्रभावशाली प्रदर्शनले आलो घाउमा नुन दलेको जस्तो भएको थियो । ट्रान्सफर विन्डोमा युनाइटेड आउने हल्ला चलेका टोबीले बिरलै गल्ती गरे र विपक्षीको हरेक आक्रमण विफल तुल्याउन ज्यान लगाए ।
यस हारको दोष ट्रान्सफर विन्डोमा खेलाडी नकिन्नु र पाएको अवसर सदुपयोग नगर्नुलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुन्न । युनाइटेडलाई हराउने स्पर्सले ट्रान्सफर विन्डोमा कुनै खेलाडी भित्र्याएन । मोउरिन्होले लगातार खेलाडी नभएकोबारे बोलिरहँदा विपक्षी प्रशिक्षक पोचेटिनो भने खेलाडी नभित्र्याउँदा कुनै समस्या नरहेको बताइरहेका थिए ।
युनाइटेडको समस्या यतिमा सीमित हुन्न । मोउरिन्होको टोलीमा ठयाक्क के गलत भइरहेको छ भन्ने भेउ पाउन कठिन छ । यो कस्तो टोली हो ? यो टोलीले कुन शैलीमा खेल्छ ? टोलीको उत्कृष्ट समीकरण कस्तो हो ? के मोउरिन्होसँग उनको उत्कृष्ट टोली उपलब्ध छ ? अहिले युनाइटेड एक सामूहिक टोलीभन्दा कामचलाउ कमजोर पाटो जोडेर बनेको कामचलाउ मेसिन जस्तो देखिएको छ । मोउरिन्हो आफ्नै टोलीसँग उत्तर खोजिरहेका छन् ।
स्पर्सविरुद्ध खेलको अन्त्यतिर युनाइटेड दबाबमा खेलिरहँदा ओल्ड ट्राफोको दर्शक संख्या तीव्र गतिमा पातलिरहेका थिए । यो क्षण डेविड मोयस प्रशिक्षक छँदा ठूला टोलीले खेलको सुरुआतमै नतिजा पक्का गर्दा जस्तो झलक दिन्थ्यो । युनाइटेड अहिले नै प्रशिक्षक छाड्ने पक्षमा भने छैन । मोउरिन्होले क्लबमा मोटो रकम खर्च गरेका छन् र उनमा सफलता हात पार्ने क्षमता पनि प्रचुर छ ।
तथ्यांक पल्टाउने हो भने मोउरिन्होले सुरुका दुई सिजनमा लिग कप र युरोपा लिग उपाधिसँगै एफए कपको फाइनल खेलेका छन् । लिभरपुल र स्पर्सको तुलनामा यो सफलता पक्कै राम्रो हो । तर मोउरिन्होको विगत हेर्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा उनी समस्यामा छन् । क्लोप र पोचेटिनो अगाडि बढा मोउरिन्हो ओरालो लाग्ने क्रममा छन् ।
मोउरिन्होको अगाडि ठूलो चुनौती खडा भएको छ । साताको अन्त्यमा बर्नलीविरुद्ध जितसहित उनले सफल सुरुआत गरेका छन् । मोउरिन्होले पुराना सबै गल्ती समेटेर त्यसलाई सच्याउँदै सुधारको पथमा बढ्नु जरुरी छ । चेल्सीमा यसअघिको दुई कार्यकालमा जसरी उनको यात्रा समाप्त भएको थियो, त्यसलाई उनले दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।
चार खेलमा दुई हारले संकटको स्थिति देखाउँदैन । तर समग्रमा हेर्दा युनाइटेड लिभरपुल र चेल्सीभन्दा ६ अंक र म्यानचेस्टर सिटीभन्दा ४ अंक पछाडि परिसकेको छ । सुरुआतको अवस्थामा यो स्थिति पन्छाउन कठिन कार्य भने होइन ।
प्रिमियर लिगको प्रतिस्पर्धा हेर्ने हो भने लिगको शीर्षस्थानमा गल्ती गरेर पनि सफल हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । अब युनाइटेडले आफ्नो प्रदर्शन सुधार मात्र नभएर अन्य टोली धेरै अगाडि नबढून् भन्ने कामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मोउरिन्हो म्यानचेस्टर युनाइटेड भित्रँदा उनीबाट सबैले क्लबको पुरानो अस्मिता फर्कने अपेक्षा राखेका थिए । सफलताको त्यो सिलसिला जुन ओल्ड ट्राफोर्डको नियमित तालिकाझैं थियो । यो भन्नु केही हतार होला तर जसरी स्पर्सले युनाइटेडको घरेलु मैदानमा दबाब कायम गरेको दृश्य थियो । मोउरिन्होबाट पुरानो दिन फिर्ने अपेक्षा गर्न निकै कठिन हुनेछ ।